Spain Oo Semi-finalka Iska Xaadirisay, Switzerland Oo Mar Kale Wacdaro Dhigtay & Naxdintii Rikoodheyaasha Ee Ku Habsatay Busquets - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSpain Oo Semi-finalka Iska Xaadirisay, Switzerland Oo Mar Kale Wacdaro Dhigtay & Naxdintii Rikoodheyaasha Ee Ku Habsatay Busquets
Spain Oo Semi-finalka Iska Xaadirisay, Switzerland Oo Mar Kale Wacdaro Dhigtay & Naxdintii Rikoodheyaasha Ee Ku Habsatay Busquets
Xulka qaranka Spain ayaa usoo gudbtay wareegga afar-dhamaadka tartanka qaramada Yurub ee Euro, kaddib markii ay rikoodheyaal 3-1 ah kaga badiyeen Switzerland oo ay ciyaartoodii caadiga ahayd kusoo dhamaatay 1-1.
Spain ayaa rikoodhihii ugu horreeyey oo uu tuurtay Sergio Busquets iska lumisay iyadoo kubadda uu birta ka jaray, hase yeeshee saddex ciyaartoy oo Switzerland ah ayaa labana laga qabtay kubadda, midna uu goolka dul-mariyey, waxaana rikoodhihii ugu dambeeyey ee guusha u xaqiijiyey Spain xiddigooda Mikel Oyarzabal.
Xulka qaranka Spain ayaa hoggaanka ciyaarta qabtay daqiiqaddii siddeedaad ee bilowgii, markaas oo ay u dabbaal-degeen gool uu iska dhaliyey Denis Zakaria oo goolkiisa ku leexiyey kubbad uu soo laaday Jordi Alaba.
Switzerland oo uu ganaax kaga maqnaa Granit Xhaka ayaa iska caabbin adag kala hor-tagtay khadka dhexe ee Spain oo awood badan muujinaysay, laakiin waxa daqiiqaddii 23aad ka baxay weeraryahankooda culayska ugu badan abuurayay ee Embolo oo dhaawac soo gaadhay, waxaana lagu beddelay Ruben Vargas oo saamayntiisii oo kale aan yeelan.
Fursado qaali ahaa ayay Spain heshay qaybta hore, waxaana ugu cadcaddaa laad xor ah oo uu Koke kusoo toogtay goolka oo uu Sommer iska saaray, halka uu Alvaro Morata ahaa ciyaartoy ku liita kubbadaha uu ka helayay xerada ganaaxa.
Daqiiqaddii 68aad ee qaybtii labaad ayay Switzerland la timid goolka barbarraha oo uu u dhaliyey Xherdan Shaqiri oo ka faa’iidaystay qalad ay sameeyeen difaaca Spain oo kubaddu dhexdooda ka baxsatay, waxaanu ku hubsaday shabaqa uu waardiyaha ka ahaa Unai Simon.
Switzerland ayaa noqotay 10 ciyaartoy daqiiqaddii 78aad, waxaana kaadh cas oo toos ah lagaga saaray laacibkii ka shaqeeyey goolka ee kubadda u dhiibay Shaqiri ee Remo Freuler oo qalad xun ku galay Moreno.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 1-1, waxaana lagu daray 30 daqiiqadood oo dheeraad ah. Spain ayaa heshay fursado qaali ahaa oo qaarkood loo fishay gool. hase yeeshee goolhaye Sommer iyo difaacyahannada Switzerland ayaa muujiyey dedaal cajiib ah, iyagoo inta badan ku dheelayay 10 ciyaartoy, waxaanay 120kii daqiiqadood kusoo dhamaadeen 1-1.
Intaas kaddib waxa la tegay rikoodheyaal, iyadoo Switzerland ay u ahayd kulankii labaad ee xidhiidh ah ee waqti dheeraad ah loogu daray iyagoo waliba gool lagaga horreeyey. France ayay wareeggii 16ka ka daba yimaaddeen oo ay ku garaaceen rikoodheyaal.
Iyagoo niyaddan wanaagsan haysta Switzerland iyo Spain oo ay u ahayd ciyaartii u horreysay ee tartankan ay aadaan rikoodheyaal ayaa waxa laadkii ugu horreeyey qaatay Sergio Busquets oo birta ka jaray, halka Mario Gavranovic uu u dhaliyey Switzerland.
Olmo ayaa u dhaliyey Spain, waxaana laga qabtay Fabian Schaer oo Switzerland ah, sidaana waxay ciyaartu ku noqotay rikoodheyaal 1-1. Labadii rikoodhe ee xigay ee ay tuurteen Rodri iyo Manuel Akanji ayaa laga qabtay.
Gerard Moreno ayaa rikoodhihii afraad ee Spain tuurtay waanu dhaliyey, laakiin Ruben Vargas oo Switzerland ah ayaa cirka toogtay oo kubadda goolka dul-mariyey. Mikel Oyarzabal ayaa Spain u dhaliyey goolkii saddexaad ee rikoodhada, loomana baahanin in ay Switzerland tuurato rikoodhaheeda ugu dambeeya maadaama aanu natiijada waxba ka beddelayn, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay 3-1 rikoodheyaal ah oo ay Spain guushu ku raacday.
Xulka qaranka Spain ayaa semi-finalka la ciyaari doona Belgium iyo Talyaaniga midkooda soo badiya.